Global Voices teny Malagasy » Mitady talen’ny Advocacy ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Mitady talen'ny Advocacy ny Global Voices
Voadika ny 02 Jona 2019 20:15 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Mitady Talen'ny Advocacy ny Global Voices mba hitarika ny tatitra, ny fikatrohana ary ny fikarohana momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny kianjan'ny zo nomerika .
Mitady kandidà manana fahalalàna lalina momba ny olana mikasika ny zo nomerika manerantany, manana traikefa amin'ny famolavolana sy fananganana media, tetikasa fikarohana sy fiarovana, fanoratana na fiarovana ny olana momba ny zo nomerika ary miara-miasa amin'ny ekipa miparitaka manerantany.
Fikambanana iraisam-pirenena, media virtoaly ahitana mpiasa, mpiantoka ary mpandray anjara an-tsitrapo ao amin'ny kaontinanta tsirairay ny Global Voices. Manoratra, mikaroka sy miaro ary mandika teny ireo mpandray anjara ao aminay mba hanasongadina tantara sy fomba fijery avy amin'izao tontolo izao izay tsy dia fahita firy eo amin'ny fampitam-baovao mahazatra iraisam-pirenena.
Manaiky izahay fa eo andalam-pihaikana ny zon'olombelona amin'ny fahalalaham-pitenenana, amin'ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao, ary amin'ny tsiambaratelo ny governemanta, ny orinasa, ary ireo mpiantsehatra hafa matanjaka manerantany . Mino izahay fa manana ny toerana manokana tsy manampaharoa amin'ny fandraketana sy fanazavana ireo fandrahonana ireo ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Mikendry ny hampiasa ny hery lehibe ananantsika – ny tambajotrantsika, ny fahalalantsika ary ny feo hamafisintsika ny tetikasa Advox – mba hampiseho ireo fomba maro ahafahan'ny teknolojia ampiasaina hanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​indrindra indrindra eo amin'ny fahalalahana miteny.
Ny Talen'ny Advocacy no hitarika ireo ezaka ireo, amin'ny maha-mpitarika azy sy amin'ny maha-mpanolo-tsaina azy ho an'ireo mpikambana marobe ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay miasa mba hampisongadina ireo fandrahonana ny zo nomerika sy ny fahalalahana miteny ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo manokana. Ny Talen'ny Advocacy no ho tetezana eo amin'ny fiarahamonin'ny Global Voices sy ireo vondrom-piarahamonina manan-daza hafa ary ireo tambajotran'ny mpikatroka zo nomerika sy ireo manam-pahaizana manerantany. Hampiseho ny fahaiza-manaony mba hanohana, hifandray ary hanamafy ireo feo maro izay miresaka ireo olana ireo ny kandidà idealy.
Hiara-hiasa amin'ny vondrona mpirotsaka an-tsitrapo sy ny ekipan'ny fanoratana ny Talen'ny Advocacy mba hanaraha-maso ireo lahatsoratra vokarina ara-stratejika eo ambanin'ny anarana Advox. Ho isan'ny ekipa mpitarika fototra ao amin'ny Global Voices ny talen'ny Advocacy.
Mahafehy ny teny Anglisy ny kandidà tena ilaina ary koa farafaharatsiny fiteny iray hafa, ary telo taona farafahakeliny amin'ireto traikefa manaraka ireto:
Fananganana sy fanatanterahana ireo tetikasa haino aman-jery na fikarohana ho an'ny daholobe
Fananganana hetsika fiarovana momba ny olana mahakasika ny zo nomerika
Famoronana sy fiarahamiasa amin'ireo tetikasa fiarahamonina antserasera na eny ifotony
Miasa ao amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa ara-kolontsaina sy isan-karazany, ahitana mpandray anjara manana traikefa isan-karazany
Monina na miasa any amin'ny firenena maro, indrindra any amin'ny Firenena Ilabolantany Atsimo
Ary manana traikefa amin'ireto sehatra manaraka ireto:
Manoratra sy mamokatra media ho an'ny mpihaino manerantany (amin'ny teny Anglisy)
Mikabary imasombahoaka (amin'ny teny anglisy)
Fifandraisana sy fanelanelanana eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina maro
Miasa mahaleotena, anaty ekipa miparitaka
Mampiasa sy manampy ny hafa mba hampiasa fitaovam-pfandraisana azo antoka sy tovozina malalaka
Tokony hampiseho fahavononana goavana ho an'ny iraka sy ny soatoavin'ny Global Voices  ireo fangatahana rehetra.
Tsy misy fepetra ara-jeografika mifandraika amin'ity toerana ity; Tsy manana birao na foibe ara-batana ny Global Voices. Tsy maintsy manana fahazoana miditra sy azo antoka amin'ny aterineto haingam-pandeha ny kandidà, ary mahay miasa tsara amin'ny tontolo virtoaly tanteraka, ary miomana amin'ny fanaovana fitsidihana iraisam-pirenena in-dimy isan-taona. Hanao tatitra any amin'ny Tale Mpanatanteraka sy Tale mpitantanana ny Global Voices ny Talen'ny Advocacy.
Ankasitrahanay indrindra ny kandidà ivelan'ny Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana ary mandrisika ny olona mandray anjara manokana ato amin'ny Global Voices mba hametraka fangatahana.
Mila ho fotoana feno ny ora fiasana saingy horaisina toy ny fifanarahana arak'asa mahaleotena
Raha hametraka fangatahana, dia alefaso any amin'ny jobs@globalvoices.org ireto manaraka ireto:
taratasy manazava ny fahaliananao fa sahaza anao ny asa
tetikasa, lahatsoratra na fanentanana telo efa niasanao (rohy na PDFs dia efa mety tsara)
Hatramin'ny 15 Jiona 2019 misasak'alina (GMT-4) ny fara-fandraisana ny fangatahana ary amin'ny teny anglisy mazava loatra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/02/138817/
 tatitra, ny fikatrohana ary ny fikarohana momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny kianjan'ny zo nomerika: https://advox.globalvoices.org/
 iraka sy ny soatoavin'ny Global Voices: https://globalvoices.org/about/